बेथानचोकमा कोभिडबाट मृत्य भएकाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग, पंजावमा एम.बि.बि.एस अध्ययनरत विजयलाई १ लाख छात्रवृत्ति - Radio Roshi
बेथानचोकमा कोभिडबाट मृत्य भएकाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग, पंजावमा एम.बि.बि.एस अध्ययनरत विजयलाई १ लाख छात्रवृत्ति
काभ्रे जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाले कोभिड–१९ (कोरोना भईरस)बाट मृत्य भएकाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग वितरण गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले मृतकका प्रति परिवारलाई जनही ५० हजार रुपैंयाको चेक प्रदान गरेका छन् । आज गाउँपालिकाको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कोभिडबाट मृत्य भएका १५ जनाका परिवारलाई कोभिड राहत स्वरूप १४ लाख ५० हजार रुपैया सहयोग रकम वितरण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै बेथानचोक गाँउपालिका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले आफु निर्वाचित भएसंगै घोषणा गरिएका कार्यहरु क्रमशः थालनी गर्दै गईरहेको बताएका छन् । उनले प्रत्येक वर्ष बेथानचोकका विभिन्न सडकहरू पाँच किलोमिटरका दरले कालोपत्रे गर्ने, ६० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकको होल बडी परिक्षण गर्ने, विद्यार्थी छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रमहरु मुख्य योजनाको रुपमा रहेको बताएका छन् ।
आज सोहि अवसरमा पंजाव मेडिकल कलेज पाकिस्तानमा एम.बि.बि.एस. दोश्रो वर्षमा अध्ययनरत बेथानचोक गाउँपालिका–२ का विजय घलानलाई गाउँपालिकाको कार्य योजना अन्तर्गत रु. १ लाख रुपैंया छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरिएको छ । उनको अध्ययन पुरा भएपछी पुनः १ लाख रुपैंया छात्रवृत्ति सहयोग प्रदान गरिने बेथानचोक गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष मधुसुधन तिमल्सिनाले जानकारी दिएका छन् ।
कार्यक्रममा पालिका उपाध्यक्ष तारा राना तिमल्सिना, भूतपूर्व पालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तिमल्सिना, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारीले एम.बि.बि.एस. दोश्रो वर्षमा अध्ययनरत विजय घलानलाई थप अध्ययनका लागि पालिकाले सहयोग गर्न पाउदा खुसि ब्यक्त गर्दै थप अध्ययन सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
बेथान्चोकमा निःशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न, ४१ जनाको सफल शल्यक्रिया